Manchester United oo la siiyay fursad ay kula soo saxiixato Edin Dzeko
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester United oo la siiyay fursad ay kula soo saxiixato Edin Dzeko
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in loo soo bandhigay fursad ay kula wareegi karto Weeraryahanka Roma Edin Dzeko inta lagu guda jiro marxaladaha ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
34 jirkaan ayaa dhaliyay 114 gool 242 kulan oo uu u saftay kooxdiisa reer Talyaani, oo ay ku jiraan sideed gool oo uu dhaliyay 20 kulan oo tartamada oo dhan ah intii lagu jiray ololihii 2020-21.
Dzeko ayaa laga yaabaa inuu u ciyaaray kulankiisii ​​ugu dambeeyay I Giallorossi, in kasta oo uu khilaaf soo kala dhex galay tababaraha kooxda ee Paulo Fonseca .
Sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport , United ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karto weeraryahankaan si ay bedel ugu noqoto Odion Ighalo , kaasoo arkay amaahdii uu ku joogay kooxda oo soo idlaatay.
Dzeko ayaa dhaliyay 72 jeer 189 kulan oo uu saftay intii uu joogay Manchester City, oo ay kujirto 50 gool 130 kulan oo Premier League ah oo uu dheelay intii u dhaxeysay 2011 iyo 2016
United ayaa xagaagii la soo dhaafay si xor ah kula soo saxiixatay Edinson Cavani , halka Anthony Martial , Marcus Rashford iyo Mason Greenwood ay sidoo kale xulasho u yihiin kooxda 20ka jeer hanatay horyaalka Ingariiska ee booska weerarka dhexe.
Previous articleReal Madrid oo rajeyneysa inuu ka tago Sergio Ramos Xagaagan
Next articleLiverpool iyo Real Madrid oo loo gacan geliyay Kylian Mbappe.